Hazard oo tilmaamay goolkii ugu fiicnaa ee uu ku arkay tartanka Champions League – Gool FM
(Madrid) 03 Agoosto 2020. Xiddiga kooxda Real Madrid ee Eden Hazard ayaa ka hadlay dhameystirka kulamada tartanka Champions League, kaddib in muddo ah ee loo joojiyay caabuqa Coronavirus.
Real Madrid ayaa isku diyaarineysa inay ku wajaho kooxda Manchester City, kulanka lugta labaad ee wareega 16-ka Champions League, xilli kulankii lugta hore ay Los Blancos la kulantay guuldarro 1-2 ah.
Eden Hazard ayaa wareysi uu ku bixiyay website-ka UEFA wuxuu ku sheegay:
“Champions League wuu soo laabtay? Haa, ma rumaysan karo, waxaan u maleynayaa in adduunka iyo dadku ay u baahan yihiin inay daawadaan kubadda cagta”.
“Tani waxay ku siinaysaa farxad, waana sababta aan u jeclahay kubadda cagta”.
Intaas kaddib Eden Hazard ayaa wuxuu ka hadlay goolkiisii uu ugu jecelyahay tartanka Champions League, wuxuuna yiri:
“Tani way fududahay sababtoo ah ma aanan dhalin goolal badan, balse goolkii aan ka dhaliyay Schalke 2013, gaar ahaan anigoo xiran maaliyada kooxda Chelsea”.
Sidoo kale Hazard ayaa tilmaamay goolkii ugu fiicnaa ee uu ku daawaday tartanka Champions League, wuxuuna yiri:
“Goolkii uu Cristiano Ronaldo ka dhaliyay kooxda Juventus, waxaan xilligaas iri (alla muxuu gool yahay), sidoo kale waxaa jira goolkii uu Gareth Bale ka dhaliyay kulankii Liverpool ee finalka tartanka Champions League 2018”.